မက်ဆီ မပါ‌ဖို့ရှိတ့ဲ ဒီတပတ် ၊ သရေကျတဲ့ချန်ပီယံ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
မက်ဆီ မပါ‌ဖို့ရှိတ့ဲ ဒီတပတ် ၊ သရေကျတဲ့ချန်ပီယံ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
PSG အသင်းရဲ့ အဓိက တိုက်စစ်မှူး ၂ ဦး ဖြစ်တဲ့ မက်ဆီ နဲ့ ဘာပေ တို့ဟာ ယမန်နေ့က ပြုလုပ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း အစီအစဉ် ကို လွဲချော် ခဲ့ကြတာ ကြောင့် ယခု အပတ် ကစားမယ့် လီဂူးဝမ်း ပွဲစဉ် အတွက် မသေချာတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိလာခဲ့ ပါတယ် ။
PSG ခံစစ်မှူးကြီး ရာမိုစ့် ဟာလည်း လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ် နိုင်ပေမယ့် အသင်းသစ် အတွက် စတင် ကစားဖို့ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးဘူးလို့ ကြားသိရ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ခံစစ်မှူး ရာဗေး ဗာရန်း ကတော့ ယမန်နေ့က ပြုလုပ် ခဲ့တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း အစီအစဉ် မှာ ပြန်လည် ပါဝင် လာခဲ့ပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။
ချက် နိုင်ငံ အခြေစိုက် ဘီလီယံနာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ် ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိုက်တက် အသင်း ကို ဝယ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
အင်တာမီလန် အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး လူတာရို မာတီနက် ဟာ အသင်း နဲ့ ၂၀၂၆ ခုနှစ် အထိ စာချုပ် သက်တမ်း တိုးလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး တိုက်စစ်မှူး ရိုမီရို လူကာကူ ရဲ့ အေးဂျင့် ဖြစ်သူက မန်စီးတီး ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် တုန်းက သူ့ရဲ့ ကစားသမားကို ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ယမန်နေ့ ညက ကစားခဲ့တဲ့ လာလီဂါ ပွဲစဉ် မှာ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် အသင်းဟာ လီဗန်တေး အသင်းနဲ့ ၂ ဂိုးစီ သရေကျပြီး အဖိုးတန် ရမှတ်တွေ ဆုံးရှုံးသွား ခဲ့ရ ပါတယ် ။
စီးရီးအေ မှာတော့ နာပိုလီ အသင်းဟာ အိမ်ကွင်းမှာ ၃ – ၀ နဲ့ အနိုင် ရပြီး အမှတ်ပေး ဇယား ကို ဆက်လက် ဦးဆောင် နေခဲ့ ပါတယ် ။
တူရကီ အခြေစိုက် မီဒီယာ လုပ်ငန်းရှင် တဦးဟာ ချန်ပီယံရှစ် ကလပ် ဟူးစီးတီး အသင်းကို ဝယ်ယူဖို့ သဘောတူညီမှုရရှိ ခဲ့တယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ကမ္ဘာကျော် ဘောလုံး သမားကြီး မာရာဒိုနာ ရဲ့ သမီး ဖြစ်သူတွေ ဟာ လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ အတွင်း ဆော်ဒီ မှာ ကစားမယ့် ဘိုကာဂျူနီယာ နဲ့ ဘာစီလိုနာ အသင်းတို့ရဲ့ မာရာဒိုနာ ကွယ်လွန်မှု နှစ်ပတ်လည် ခြေစမ်းပွဲကို ဂုဏ်ပြု ပွဲထက် စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ အကျိုး အမြတ်ကို ပိုမို ရှေးရှုတဲ့ ပွဲ ဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ပြီး မတက် ရောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ် ထားတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လမှာ ဖြစ်ပွား ခဲ့တဲ့ နောဝှစ်စီးတီး တိုက်စစ်မှူး အီမီလီယာနို ဆာလာ ရဲ့ လေယာဉ် ပျက်ကျမှုမှာ လေယာဉ်မှူး ( ကွယ်လွန် ) က အဓိက တာဝန် ရှိသူ ဖြစ်တယ် လို့ စစ်ဆေးမှု ရလဒ် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ ပါပြီ ။
အဆိုပါ ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသက် ၆၇ နှစ် အရွယ် ခရီးစဉ် စီစဉ်ပေးသူ ဟာ တရားစွဲဆို ခံရ နိုင်တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
Previous Article ကွန်တီနဲ့ အဆင်ပြေဖို့ ရော်နယ်ဒို ဘာလုပ်ရမလဲ ၊ ရော်နယ်ဒို ဂျူဗီမှာ အောင်မြင်ခဲ့လားဆိုတာတွေကို သုံးသပ်ခဲ့ကြတဲ့ စကားဝိုင်း
Next Article ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကို ငြင်းပယ်ကာ လီဗာပူးကို ရွေးချယ်ရန် ဘွန်ဒက်လီဂါကြယ်ပွင့် ၂ ဦးကို တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ ဂလင်းဂျွန်ဆင်